Achịcha agwọ - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Egbu egbu egbu na ogwe aka dị ala na-eme ka nwanyị na-elegharị anya
Ụmụ nwanyị Brown na-ahụ Snake tattoo na ala aka; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
2. Egbu egbu egbu na nwa agbọghọ ahụ na-enye ya ihe a ma ama
Ụmụ agbọghọ ndị nwere akpụkpọ anụ ga-aga maka akara a nke akagbu Snake n'aka ha. Nke a na-enye ha ihe ama ama ama
3. Egbu egbu egbu na azụ mere nwa agbọghọ mara mma ma mara mma
Ụmụ agbọghọ hụrụ Snake tattoo na azụ ha. Nke a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
4. Egbu egbugbu na mkpịsị aka na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown na-eji okpu aka na-acha anụnụ anụnụ na-eji akara aka; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
5. Egbu egbu egbu na apata ụkwụ na-eme ka ụmụ agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahụ aja n'anya na-egbu Snake tattoo na apata ụkwụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha na-adọrọ adọrọ
6. Egbu egbu egbu na azụ azụ na-eweta anya mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ ka egbugbu Snake na -emepụta ink na-acha aja aja n'elu ala ha azụ; egbu egbu egbu a na-eme ha ka ha dị mma ma dị mma
7. Ogbugbu agwọ na ogwe aka na ink nke ink na-eme ka mmadụ dị jụụ.
Ndị mmadụ ga-aga maka egbu egbu na-eji ejiji ink na-eme ka ha dị jụụ.
8. Ụdị Snake na azụ na-eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị mma
Ụmụ nwanyị na-achọ egbu egbu na azụ ha iji nye ha anya dị mma.
9. Egbu egbu egbu n'akụkụ azụ na-eweta mma mara mma
Ụmụ agbọghọ na-eyikwasị uwe na-enweghị aka na-ahụ n'anya iji nweta egbu egbu egbu egbu n'akụkụ ha azụ. Nke a na-eme ka ha dịkwuo mma.
10. Egbu egbu egbu n'ubu na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ tattoo agwọ na ubu ha na ejiji ink ojii; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
11. Ụdị Snake maka apata apata ụkwụ na-eweta anya nwanyi ha
Ụmụ agbọghọ dịka egbuke egbuke egbu egbu na apata ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a mara mma ma mee ka àgwà ụmụ nwanyị dịkwuo mma.
12. Ụdị Snake na-acha uhie uhie na oji ink na ogwe aka na-eme ka nwanyị mara mma.
Ụmụ nwanyị na-aga maka egbu egbu na ogwe aka ha ka ọ na-eme ka ha mara mma
13. Ụdị Snake na ogwe aka zuru oke na-eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị mma
Ụmụ nwanyị na-eji egbu egbu egbu egbu na aka ha iji mee ka ha mara mma.
14. Ụmụ agbọghọ na-eme Tattoo agwọ na nkpa aka iji mee ya
Ụmụ agbọghọ na-eme ka egbu egbu egbu na nkpa aka iji gosipụta ogwe aka ha ma mee ka ọ bụrụ ebe ọ ga-adọrọ mmasị
15. Egbu egbu egbu na ink nwa na ogwe aka na-akwalite ihu ọma na ụmụ nwanyị
Ụmụ nwanyị ndị na-achọ ịhụ ihe na-egbuke egbuke na-aga maka egbu egbugbu e ji ya na akara ojii.
16. Egbu egbu egbu n'elu ogwe aka dị n'ihu ka ụmụ agbọghọ nwee anya nyobi
Ụmụ nwanyị na-ahụ tattoo agwọ na ogwe aka aka ha na-eji oji ink dee ya; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
17. Egbu agwọ na ogwe aka ekpe, na-eme ka ụmụ nwoke na-eguzosi ike n'ihe
Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-enwe mmasị na -eme egbu egbu na ogwe aka ekpe ha iji gosipụta iguzosi ike n'ihe ha na ime ka ha yie ihe dị mma
18. Ụdị egbu egbu agwọ a na ejiji ejiji na-eme ka ogwe aka aka ekpe chee ihu
Ụmụ nwanyị ndị uwe ojii na-ejighị aka ha ga-enwe mmasị inweta mkpịsị uhie a na-agba, egbu egbu agwọ na aka ekpe ha iji mee ka ha mara mma.
19. Ụdị Snake Maka Ụmụ nwanyị na ụkwụ na ifuru na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka ha dị mma.
Brown na-ekpuchi ụmụ nwanyị ga-aga maka Tattoo snake na-acha anụnụ anụnụ onk na ụkwụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma ma mara mma
20. Egbu egbu egbu n'apata ụkwụ na-eme ka nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị Brown na-eji egbuke egbuke egbu egbu egbu egbu n'apata ụkwụ ha na-egbuke egbuke a na-eme ka ha mara mma.
21. SMgbu egbugbu na onk nke ozo na ogwe aka na-eme ka mmadu nwee obi ike.
Ndị nwere ntutu ojii ga-ahụ tattoo agwọ ahụ site na ijiji ink ojii; egbu egbu egbu a na-acha ntutu na akpụkpọ anụ ka ha wee nwee obi ike.
22. Ụmụ agbọghọ na-aga iji egbu egbu n'azụ aka ha iji mee ka ha mara mma.
23. Ụdị Snake na afọ na-ewepụta anya dị ịtụnanya na ụmụ agbọghọ.
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ Snake Tattoo na mkpịsị nwa ink na afọ ha iji mee ka ha dị ịtụnanya.
24. Egbu egbu egbu e ji ejiji na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ n'azụ ala mere ka ụmụ agbọghọ mara mma.
Ụmụ agbọghọ na-eme ka egbugbu Snake jiri obere ink dee ya n'azụ iji mee ka ọ bụrụ isi ihe
egbu egbu osisi lotusndị na-egbuke egbukeNtuba ntugharienyi kacha mma enyirip tattoosegbu egbu egbudi na nwunyeegbugbu egbugbuaka mma akana-adọ aka mmaAnkle Tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokeụkwụ akaegbu egbu ebighi ebiazụ azụEgwu ugongwusi pusiegbu egbu diamondnnụnụaka akakoi ika tattooegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu hennaaka akaọnwa tattoosegbu egbuarịlịka arịlịkaakwara obiima ima mmaegbu egbu okpuechiche egbugbuna-egbu egbundị mmụọ oziokpueze okpuezeakpị akpịudara okooko osisiỤdị ekpomkpazodiac akara akaraụmụnne mgbuagbụrụ ebon'olu oluakara ntụpọGeometric Tattoosmehndi imeweegwu egwuegbu egbu mmiriọdụm ọdụmenyí egbu egbuUche obimma tattoos